Igboezue: Taa gọọmentị ụta maka oke ogbugbu mmadụ - BBC News Ìgbò
Igboezue: Taa gọọmentị ụta maka oke ogbugbu mmadụ
Nkenke aha onyonyo Nsogbu Fulani ọchịehi na ndị ọrụugbo atala isi mmadụ karịrị puku abụọ na otu afọ na ọkara gara aga
Otu Igboezue ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mba ekwuola ka gọọmentị kwụsị ịtụ ndị irọ aka sị na ọ bụ ndị chọrọ ka agha daa na Najiria bụ ndị na-akụsu oke ogbugbu mmadụ na-eme na Naijiria ugbua.
Kama ha tara gọọmenti etiti ụta sị na ọ bụ ha ji aka rụta mmanụ tezuru ala Naịjirịa ahụ n'ihi na ha ejighị n'oge mee ihe banyere mkpamkpa ndị Fulani ọchịehi na-akpa nke ha kwuru mere ya bụ nsogbu a jiri kawanye njọ.
Dịka ụlọọrụ akụkọ Vanguard kwuru, onyeisi Igboezue bụ Pius Okoye si, na "Ọ bụrụ na e nwere onye ọbụla na-akwado agha na Naijiria, na ọ bụ ndị Fulani na-achị ehi na ndị otu Miyetti Allah ndị ji ọnụ ha kweta ma kwukwa ihe mere ha jiri gbuo mmadụ 73 na Benue steeti n'ọnwa Jenụwarị afọ a, mana ọnweghị onye n'ime ha anwụchiri."
A ga-akpọ Fulani ọchịehi 'oyiegwu'?
Kwụsịnu ichi ehi na-agagharị
Ndị Fulani na-achi ehi egbuola mmadụ 2,000
Kama ime ihe maka ndị ọchịehi ogbummadụ, ọ sịrị na onyeisiala Buhari tugharịrị na-ebo ebubo na ogbugbu mmadụ a bụ ndị chọrọ ibute agha na Naijiria na-abọlite ya, ebe ọ gbaburu nkịtị kemgbe ha na-akpa ike, na-egeghị ntị n'oku ndị Naijiria na-akpọ ka a nwụchịe ndị isi Miyetti Allah.
O kwuru na Buhari adụghị ndị ọchịehi ọdụ, ọzighaghị ndị agha ngwangwa maọbụ ga leta ndị ọdachị ndịa mere na Benue ozigbo ha mere.
Ndị Naịjirịa etinyela ọnụ na njem Buhari
Mmachi Codeine: Ọgwụ ụkwara adaala ọnụ
A ga-enyocha mmadụ puku 130 chọrọ ịba uweojii isi
Ihe Oriri Eri ji ewu ewu
ISWAP egbụọla ndị agha Naịjirịa abụọ na otu onye uweojii
Ipob a ga-arịọ Rotimi Amaechi mgbaghara ugbua?